युगसम्बाद साप्ताहिक - वर्षा सुरु भएपछि कस्तो होला काठमाडौको हालत ?
वर्षा सुरु भएपछि कस्तो होला काठमाडौको हालत ?
Tuesday, 05.28.2013, 08:12am (GMT+5.5)
मञ्जुश्रीले चोभारको डाँडो काटेर पानीको निकास खोलेपछि काठमाडौं उपत्यकामा मानव वस्तीको विकास भयो भन्ने पौराणिक कथा छ । सो कथा अनुसार राजधानी उपत्यका ठूलो तलाउ थियो । यसको भूबनोट हेर्दा पनि हो जस्तै लाग्छ । कचौरा आकारका उपत्यका घना आवादीका लागि उपयुक्त नभए पनि सेवा, सुविधा र अवसरको केन्द्रीकृत अवस्थाले गर्दा राजधानीमा धान्नै नसकिने चाप परेको छ । यसैका कारण राजधानी उपत्यकाले अनेक किसिमका समस्या भोगिरहेको छ ।
खाने पानीको समस्या, ढल निकासको समस्या, सडकको समस्या, शान्ति सुरक्षाको समस्या लगायत अनगिन्ती समस्याको भण्डार भए पनि राजधानीप्रतिको आकर्षणमा कुनै कमी आएको छैन । त्यसैले राजधानीबासी एकपछि अर्को गर्दै समस्याको जञ्जालमा बेरिंदै छन् । यस्तै समस्यामा बेरिने क्रममा पछिल्लो समय सडक विस्तार र निर्माणको सुस्त गति पनि थपिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको राजधानीको सडक विस्तार कार्यले राजधानीका सडकहरू फराकिलो त बन्यो तर समयमै भत्काइएका संरचनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा यतिबेला राजधानीबासी ठूलो सकसमा परेका छन् । वर्षायाम सुरु हुनु अगावै सडक मर्मतकार्य सम्पन्न भैसक्ने सरकारी दावी मित्थ्या सावित भैरहेको छ । प्रि–मनसुनका रुपमा फाटफुट हुने वर्षाले पनि राजधानीको बेहाल हुने गरेको अवस्था छ । बिहिबार परेको मुसलधारे पानीले राजधानीको जनजीवन यति अस्तव्यस्त बनायो कि असार–साउन सुरु भएपछि के होला भन्ने त्रास उत्पन्न छ ।
विकास निर्माणको काम सुरु गर्ने तर समयमै सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरतामा कहिल्यै पूर्ण बिराम लागेन । राजधानीको त हालत यस्तो छ भने देशका दुर्गम भेगमा संचालन भएका विकास आयोजनाको हालत के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारका उच्च अधिकारीहरू सडक निर्माणको अनुगमन गर्दै समयमै काम सम्पन्न नगरे कारवाही गरिनेछ भने पनि परिणाम त्यस्तो छैन । निर्माण व्यवसायीका रुपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा ‘दादा’हरूको संलग्नताले गर्दा हेपाहा प्रवृत्ति हावी भैरहेको छ । व्यावसायिक दक्षताले नभै राजनीतिक आड भरोसाले ठेक्का लिने र मोटो रकम कमिशनका रुपमा दिने गर्दा निर्माणको गुणस्तरमा पनि ठूलो घोटाला भैरहेको छ ।
सडक, जलविद्युत, पुल, सिंचाई आयोजना जस्ता मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिने क्षेत्रको निर्माणका लागि पनि राजनीतिक प्रभावले काम गर्दा नेपालको विकास निर्माणको हालत अत्यन्त नाजुक हुन पुगेको छ । यतिबेला राजधानीबासीले भोगेको पीडा त्यस्तै हो । ढल निकासको उचित प्रबन्ध नभएको राजधानीमा सानो पानी पर्दा पनि सडक पोखरीमा परिणत हुने गरेको छ । यस्तो समस्याको समाधान गुणस्तरीय निर्माण र निकासको उचित प्रबन्ध हो तर यतातिर कमै मात्र ध्यान दिने गरिएको छ ।
तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्ने गर्दा जनताले सधै सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था छ । घाम लागे धुलो उडेर हिंड्न नसकिने त पानी परे जताततै पोखरी नै पोखरी हुने गरेको राजधानीमा भत्काइएका संरचनाको टिकाउपूर्ण निर्माण भएन भने सोच्दै नसोचेको दुर्घटना हुने अवस्था सिर्जित छ । बिहिबार भएको वर्षाले नै यसको संकेत दिएको छ । जताततै पानी नै पानी र भत्किएको सडकका कारण पैदल यात्री र सवारी साधनको यात्रा जोखिमपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
एक दिन पानी नपरे राजधानी धुलाम्मे तथा एक घण्टा पानी परे हिलाम्मे र जलमग्न हुन्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि गुणस्तरीय निर्माण त्यो पनि समयमै हुनु अति आवश्यक छ । अबको केही हप्ताबाट मनसुन सुरु हुन्छ । मनसुन सुरु भएपछि राजधानीको सडकको हालत के हुने हो भन्ने चिन्ता र त्रास यससंगै उब्जिएको छ । इमान्दार ढंगले काम गरे सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका संरचनाको बाँकी काम सम्पन्न नहुने होइन तर त्यसैलाई बहाना बनाएर अनधिकृत लाभ लिने सोचले गर्दा समयमै काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।
सरकारी निकायको अनुगमनको पनि केही अर्थ छैन । सडक किनारमा थुपारिएका गिट्टी तथा ढुंगा हप्तौंसम्म फिजाइएको हुँदैन, पर्खाल लगाउने ठाउँमा दुईजना कामदार खटिएका हुन्छन् । अनि कसरी समयमा काम सकिन्छ ? यति मात्र होइन कार्यालय समयमा सडकको बीच भाग खन्ने गरिन्छ । सडक अबरुद्ध हुने किसिमका कामहरू रातको समयमा गर्दा सबभन्दा उत्तम हुने भए पनि ठेकेदारले काम सुचारु भैरहेको देखाउन मात्र सडकमा मजदुर खटाउने गरेका छन् ।
काममा घोटाला भैरहेको छ, ढिलासुस्ती भैरहेको छ भन्ने जानकार सरकारी निकायले राजनीतिक दवावमा कानुन बमोजिम चाल्नुपर्ने कदम समेत चाल्ने गरेका छैनन् । त्यस्ता अनियमितताप्रति आँखा चिम्लिए उल्टै प्रोत्साहन पाइने हुँदा प्रलोभनका कारण सरकारी काम कहिले जाला घामको शैलीमा मात्र काम भैरहेको छ ।